The Irrawaddy's Blog: မေမြတ်နိုးရဲ့ Miss Asia Pacific 2014 သရဖူကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ
မေမြတ်နိုးရဲ့ Miss Asia Pacific 2014 သရဖူကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Asia Pacific 2014 အလှမယ် ပြိုင်ပွဲမှာ သရဖူ ဆုရှင် မေမြတ်နိုးဟာ Miss Asia Pacific မူလ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သရဖူ ရုပ်သိမ်းခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။
မေမြတ်နိုး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေချိန်မှာ အခုလို သရဖူရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပြီး သူ့အစား အရည်အချင်း ပြည့်မီတဲ့ Miss Asia Pacific World 2014 ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာတဲ့ အကြောင်း Beauty Pageants Of Myanmar ကို ပေးပို့တဲ့ အကြောင်းကြားစာက ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ မယ်ပြိုင်ပွဲ သရဖူ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ မေမြတ်နိုးဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာလို့ အခုလို သရဖူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို မေမြတ်နိုး ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ရရှိခဲ့တဲ့ သရဖူနဲ့ အလှမယ် စလွယ်တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ထံကို ပြန်လည်အပ်နှင်းရမှာဖြစ် တယ်လို့ Beauty Pageants Of Myanmar က ဆိုပါတယ်။
Miss Asia Pacific World ရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာလည်း 2014 သရဖူဆုရှင်နဲ့ အလှမယ် စာရင်း ဓာတ်ပုံဖော်ပြမှု တွေမှာလည်း သရဖူးဆုရှင် မေမြတ်နိုးကို သရဖူ ပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံ ကိုလည်း ဖြုတ်သွားခဲ့ပါပြီ။
မေမြတ်နိုးကတော့ သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က အခုလို ရေးထားပါတယ်။
What doesn't kill you makes you stronger ....
မေမြတ်နိုးကို သရဖူ ရုပ်သိမ်းတဲ့ အကြောင်း Miss Asia Pacific World ရဲ့တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ မှာလည်း အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted in: Beauty and Fashion , Celebrity , Eaint Than Zin
လှနုထွန်းက ဟိုကအဖွဲ့ကို အတို့အထောင်လုပ် negotiate လုပ်ပြီး သရဖူကို သိမ်းအောင် လုပ်တာနေမှာပေါ့။ သူ သိမ်းလို့မှ မရတာ။ သူသိမ်းလို့ရတဲ့သူကို သူသိမ်းတယ်လေ။ သူနဲ့ မေမြတ်နိုး စပြီး အဆင်မပြေကတည်းက ဟိုဘက် org: က သိမ်းမယ်ဆိုလို့ သူက တောင်းပန်ထားရပါတယ် ဆိုပြီး အသံထွက်နေတာလေ။ ဒီကြားထဲမှာ ဟိုဘက် အဖွဲ့ကို သရဖူပြန်သိမ်းအောင် သူကြိုးပမ်းအားထုတ်မှာပေါ့။ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ အရမ်းလည်လိုက်တာနော်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က နိုင်ငံတကာ သရဖူကို အခု ပထမဆုံး စရတာ။ တိုင်းပြည်အတွက် မထောက်ထားဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိစ္စတွေဘဲ ကြည့်ပြီး ရိုက်ချပစ်တာနော်။ ဟိုဘက်က အဖွဲ့ကလဲ national director စကားဘဲ ယုံမှာပေါ့။
Great!...that's the lesson for her bad attitute....
very sure! i strongly agree that!
မြန် မာ ပြည် က လူ တွေ က တ ကယ် ကို အ သိ ခေါက် ခက် အ ဝင် နက် ဆို တဲ့ သူ တွေ ကြီး ပဲ ။ ပ ထ မ ဦး ဆုံး မယ် အ ဖြစ် ရွေး ခြယ် ဖြစ် တာ ဒီ မိန်း ခ လေး မှာ အ ရည် အ ချင်း ရှိ ခဲ့ လို့ ရွေး ခြယ် ခဲ့ တယ် ။ ဒါ ပေ မဲ့ ပြု စု ပျိုး ထောင် မူ ညံ ဖျင်း တော့ စိတ် ဓာတ် ပိုင်း ဆိုင် ရာ ချို့ ရွင်း အား နည်း ခဲ့ တယ် ၊ ပြည် တွင်း ပြည် ပ အ ဖွဲ့ အ စည်း တွေ နဲ့ အ လုပ် လုပ် တော့ မ လို လား အပ် တဲ့ အ ခက် အ ခဲ တွေ နဲ့ ကြုံ ခဲ့ ရ တယ် ။ ဘယ် အ ဖွဲ့ အ စည်း က မှ ဒီ လို ကျ ရှုံး တဲ့ လမ်း ကို မ ရွေး ချင် ကြ ဘူး ။ ဆု ရ ပြီး နောက် ပိုင်း မှာ ပ ထ မ မိ ခင် အ ဖွဲ့ အ စည်း ၊ ဒု တိ ယ ရုပ် ရှင် အ သိုင်း အ ဝိုင်း က အ ဖွဲ့ အ စည်း ၊ နောက် ဆုံး တော့ မယ် ဆု crown ပေး ခဲ့ တဲ့ အ ဖွဲ့ အ စည်း ။ လူ ဆို တာ အ လုပ် လုပ် ကြည့် ရင် သိ နိုင် ပါ တယ် ။ ဒီ လူ ဟာ ဘယ် လို့ လူ မျိုး လဲ ဆို တာ ကို ။ နောက် ဆုံး တော့ ဘယ် သူ မ ပြု မိ မိ မှု ဆို တာ ဝန် ခံ လိုက် ပါ ။ မ ပြည့် တဲ့ အိုး ဟာ ဘောင် ဘင် ခတ် လေ့ ရှိ တယ် ။
မြန် မာ နိုင် ငံ က အ ဖွဲ့ အ စည်း က တိုင်း ပြည် ရဲ့ ဂုဏ် ကို ငဲ့ ပြီး ကို ရီး ယား အ ထိ သွား တာ ကြီး တဲ့ အ မှု ငယ် အောင် ဘာ မှ ပြ သ နာ မ ဖြစ် ခဲ့ ဘူး ။ အ ဝေ မ တဲ့ ဘူး ဆို ရင် ကို ရီး ယား အ ထိ တောင် မ ရောက် ဘူး ။ စဉ်း စား ကြည့် အုန်း ။
ကို ရီး ယား တွေ သာ သူ တို့ နဲ့ အ လုပ် လုပ် ကြည့် တော့ မှ ဒီ သား အ မိ က ဘယ် လို လူ တန်း စား လဲ ဆို တာ န ဖူး တွေ့ ဒူး တွေ့ ဖြစ် သွား ခဲ့ တယ် ။ အ လုပ် လုပ် တဲ့ နေ ရာ မှာ အ ပြစ် ရှိ ခဲ့ ရင် တောင် သံ သ ယ အ ကြိုး ကို ခံ စား ခွင့် ရှိ လို့ ဒု တိ ယ အ ကြိမ် အ ခွင့် အ ရေး ရ ခဲ့ တာ ။ ဒါ ပေ မဲ့ အဲ ဒီ ဒု တိ ယ အ ခွင့် အ ရေး ကို အ လွဲ သုံး စား လုပ် ခဲ့ တယ် ။ They wasted their second chance.
ကို ရီး ယား ကို မ သွား ခင် မြန် မာ နိုင် ငံ ရဲ့ မိ ခင် အ ဖွဲ့ အ စည်း နဲ့ လက် တွဲ ဖြုတ် ခဲ့ တာ မှာ ကို ရီး ယား တွေ က ကျေ နပ် ပုံ မ ရ ဘူး ။
So sad but good! (My personal wish ) Let Myanmar not contest any more in those Miss Universe/ World/ Pacific whatever! The writing I read was so funny and invalid at all to dethrone her! To survey the current situation in Myanmar, the models are dressing as (not like) Prostitutes, Porn-stars, pole dancers, call-girls, lesbians, etc. We have very bad negative impact from those so-called Miss Contests. To be international, we need to interact with international cultures, yea, but we should adopt other's culture inamild way, moderate way. We should not dress like Hell! This event can be Good from Bad, if we are aware of this. Moreover, it seems the Organization does not like Myanmar, they don't like us, why should we contest further? I am proud of Myanmar, proud of her, the Miss Asia Pacific group is so odd :) Thanks!
So sad for Myanmar.Why did she do that???
right,i strongly recommend your comment
ဇယားကိုရှုပ်တယ် ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူးပေးလိုက်သိမ်းလိုက်နဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ
ဖဲကြိုးနက်ဆရာဝန်များ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘုတလင်မြို့နယ် သခ္ခတ္တတိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ဒေါက်တာမင်းမင်းစိုး နှင့် ဒေါက်တာ မို့မို့လင်...